AFE IR Sensọ Factory, Suppliers - China AFE IR Sensor Manufacturers
Integrated ASIC AFE Thermopile IR Sensor Na-enweghị kọntaktị na-ekpo ọkụ na-ekpo ọkụ na thermometer STP10DF35G1
STP10DF35G1 nwere ụdị ihe nrụkọ thermopile nke CMOS kwekọrọ n'ụdị nwere ezi uche, obere ọnụọgụ ọkụ nke uche yana ntụgharị na ntụkwasị obi dị elu. Ejikọtara mgbawa ASIC AFE (Analog Front End) na thermopile sensor, na-enye 1000 uru maka obere voltaji na-eweta nke ihe mmetụta thermopile. A na-agbakwunye voltage nkwụnye ọkụ na ntinye ihe mmetụta. Enwere ike gbanwee ADC nke na-emepụta ihe mgbapụta ihe mmetụta nke ihe mmetụta, nke na-ewepụ ihe nkenke Zero-Drift amplifi na DC-DC circuit. A na-ejikọkwa mgbawa mgbatị thermistor dị elu maka nkwụghachi ụgwọ ọnọdụ okpomọkụ.
Analog Front End Integrated Infrared Thermopile Na-abụghị kọntaktị okpomọkụ Sensor STP10DF55G1
STP10DF55G1 nwere ụdị ihe nrụkọ ihu igwe na-arụkọ ọrụ ọnụ nke CMOS na-egosipụta ezi uche, obere ọnụọgụ ọnụọgụ nke uche yana ntụgharị na ntụkwasị obi dị elu. Ejikọtara mgbawa ASIC AFE (Analog Front End) na thermopile sensor, na-enye 1000 uru maka obere voltaji na-eweta nke ihe mmetụta thermopile. A na-agbakwunye voltage nkwụnye ọkụ na ntinye ihe mmetụta. Enwere ike gbanwee ADC nke na-emepụta ihe mgbapụta ihe mmetụta nke ihe mmetụta, nke na-ewepụ ihe nkenke Zero-Drift amplifi na DC-DC circuit. A na-ejikọkwa mgbawa mgbatị thermistor dị elu maka nkwụghachi ụgwọ ọnọdụ okpomọkụ.
ASIC Integrated AFE Infrared Sensọ Thermopile kọntaktị na-enweghị okpomọkụ na-atụ STP11DF55G1
STP11DF55G1 nwere ụdị ihe nrụkọ ihu igwe na-arụkọ ọrụ ọnụ nke CMOS na-egosipụta ezi uche, obere ọnụọgụ nke nnabata yana ntụgharị na ntụkwasị obi dị elu. Otu 5 ~ 14 um gafere nza n'ihu ihe mmetụta ahụ na-eme ka ngwaọrụ ahụ nwee mmetụta dị ọkụ dị elu ruo 1500 ° C. Ejikọtara mgbawa ASIC AFE (Analog Front End) na thermopile sensor, na-enye 1000 ma ọ bụ 2000 uru maka obere voltaji nke ihe mmetụta thermopile. A na-agbakwunye voltage nkwụnye ọkụ na ntinye ihe mmetụta. Enwere ike gbanwee ADC nke na-emepụta ihe mgbapụta ihe mmetụta nke ihe mmetụta, nke na-ewepụ ihe nkenke Zero-Drift amplifi na DC-DC circuit. A na-ejikọkwa mgbawa mgbatị thermistor dị elu maka nkwụghachi ụgwọ ọnọdụ okpomọkụ.
AFE Integrated Contactless okpomọkụ Pyrometry Thermometer Thermopile Sensor STP11DF85G1
STP11DF85G1 gụnyere ụdị ihe nrụnye thermopile nke CMOS kwekọrọ na ya nwere ezi uche, obere ọnụọgụ nke nnabata yana ntụgharị na ntụkwasị obi dị elu. Ihe nhicha 8 ~ 14 um na-aga n'ihu ihe mmetụta ahụ na-eme ka ngwaọrụ ahụ nwee mmetụta dị ọkụ dị elu ruo 1500 Celsius. Ejikọtara mgbawa ASIC AFE (Analog Front End) na thermopile sensor, na-enye 1000 ma ọ bụ 2000 uru maka obere voltaji nke ihe mmetụta thermopile. A na-agbakwunye voltage nkwụnye ọkụ na ntinye ihe mmetụta. Enwere ike gbanwee ADC nke na-emepụta ihe mgbapụta ihe mmetụta nke ihe mmetụta, nke na-ewepụ ihe nkenke Zero-Drift amplifi na DC-DC circuit. A na-ejikọkwa mgbawa mgbatị thermistor dị elu maka nkwụghachi ụgwọ ọnọdụ okpomọkụ.
Pylọ ọrụ Pyrometer okpomọkụ na-arụ ọrụ na-enweghị kọntaktị Infrared Thermopile Sensor STP11DF89G1
STP11DF89G1 gụnyere ụdị ihe nrụnye thermopile nke CMOS kwekọrọ na ya nwere ezigbo uche, obere ọnụọgụ nke nnabata yana ntụgharị na ntụkwasị obi dị elu. Ihe nhicha 8 ~ 14 um na-aga n'ihu ihe mmetụta ahụ na-eme ka ngwaọrụ ahụ nwee mmetụta dị ọkụ dị elu ruo 1500 Celsius. Ejikọtara mgbawa ASIC AFE (Analog Front End) na thermopile sensor, na-enye 1000 ma ọ bụ 2000 uru maka obere voltaji nke ihe mmetụta thermopile. A na-agbakwunye voltage nkwụnye ọkụ na ntinye ihe mmetụta. Enwere ike gbanwee ADC nke na-emepụta ihe mgbapụta ihe mmetụta nke ihe mmetụta, nke na-ewepụ ihe nkenke Zero-Drift amplifi na DC-DC circuit. A na-ejikọkwa mgbawa mgbatị thermistor dị elu maka nkwụghachi ụgwọ ọnọdụ okpomọkụ.